Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Otu esi achọpụta njem na-adigide ngwa ngwa
Mmemme na-adịgide adịgide nke ọsụ ụzọ na-ejikọ ọnụ maka ụdị akụrụngwa niile n'ụwa niile ma na-eme ka ịchọta ozi nkwado ntụkwasị obi dị mfe maka ndị ahịa.
Travel Sustainable baajị, ihe ntụkwasị obi, ihe nkwado zuru ụwa ọnụ nke ga-enye ndị njem nọ n'ụwa niile na-achọ ime nhọrọ njem ga-adigide. Ezubere ka ọ bụrụ nke dabara na ụdị ihe onwunwe dị iche iche, site na ụlọ, B&Bs na ụlọ ezumike na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe ntụrụndụ na ọbụna ụlọ osisi, na ime mgbanwe na eziokwu obodo na nlebara anya, atụmatụ a bụ ụdị mbụ na ụlọ ọrụ ahụ.
N'iburu n'uche na 64% nke ndị njem na-ekwu na ha chọrọ ịnọ n'ụlọ na-adigide n'afọ na-abịanụ yana ihe karịrị nde 28 nde na Booking.com, ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ ohere dị ukwuu iji gosipụta mgbalị ndị mmekọ ya na-eme iji mepụta. ahụmahụ na-adigide karị, na n'aka nke ya, na-eme ka ọ dịrị ndị njem mfe ịchọta ụzọ na-adịgide adịgide iji nọrọ. Na ụzọ atọ n'ụzọ anọ (63%) na-egosi na ha ga-enwe ike ịhọrọ otu ebe obibi na-emejuputa omume na-adịgide adịgide, ọ na-akwụghachi ụgwọ ma na-agba ndị na-enye ume ume ka ha mee usoro ndị ọzọ na njem nkwado ha n'otu n'otu.
"Ịmepụta ụlọ ọrụ njem na-adịgide adịgide n'ezie ga-ewe oge, nhazi na mgbalị siri ike, ma ọganihu ga-ekwe omume site n'ịga n'ihu na mmepụta ihe ọhụrụ, nkwado ndị mmekọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe," ka Marianne Gybels, Director nke Sustainability na Booking.com kwuru. "Anyị na-aghọta mgbalị nkwado nke ọtụtụ ihe onwunwe gburugburu ụwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị na nke doro anya maka ndị na-azụ ahịa. Igosipụta omume ha nwere na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịme nhọrọ nke ihe ọmụma na olileanya na-adigide maka njem ha na-esote, n'agbanyeghị ebe ha chọrọ ịga. Ya mere, na-akpali ọbụna ọtụtụ ndị mmekọ anyị ka ha mee usoro ọzọ iji rụọ ọrụ nke ọma."